Corruption ဆိုသောစာလုံးကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လိုပါသည် | MoeMaKa Burmese News & Media
အစိုးရဝန်ထမ်းများကို ငွေပေးမှလုပ်ပေးခြင်းကို Corruption ဟု ကျွန်ုပ် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပါသည်။ စီးပွားရေးသမားများ၊ ပြည်သူလူထုများ လာတ်ပေး၊ လာတ်တောင်းခံရခြင်းကို Corruption ဟု စာရေးသူ မယူဆပါ။ မြန်မာပြည်အတွက် အကောင်းဆုံး Corruption စာတန်းကို ဒေါက်တာဦးမြင့် ပြုစုခဲ့ပါသည်။ ခြစားမှုကို မနှစ်မြို့သူများအတွက် U Myint corruption ဟု အင်တာနက်၊ ဂူဂယ်တွင်ရိုက်နှိပ်ရှာဖွေ ဖတ်ရှု၊ လက်စွဲထားရမည်ဖြစ်သည်။
ဥပမာ.. မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်လုပ်လိုသည်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လုပ်လိုသည်။ စာတိုက်မှနိုင်ငံခြားမှစာ သွားရွေးယူမည်။ အစိုးရပိုင် လေကြောင်းလက်မှတ်ဝယ်ခြင်း၊ အစိုးရကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်ခြင်း၊ စသည့် အသေးစားအဆင့်များမှ နောက်ဆုံး အစိုးရထံမှ သွင်း/ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း၊ ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းတစ်ခု ရယူခြင်း အဆုံး အစိုးရနှင့်ပတ်သက်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ငွေမပေးပဲ၊ စနစ်တကျလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကို လာဘ်စားမှုနည်းခြင်းဟု ကျွန်ုပ်ကောက်နုတ်ချက်ချပါသည်။ စင်ကာပူမြန်မာသံရုံးတွင် ပတ်စပို့အသစ်လဲပါက ဒေါ်လာ၁၅ဝ ပေးပြီး၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ၂ရက်နှင့်လုပ်ပေးပါသည်။ ကမ္ဘာ့စံချိန်ဖြစ်သည်။ စင်ကာပူနိုင်ငံသားတစ်ဦး၊ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦး ပတ်စပို့အသစ်လဲလိုပါက ၂လအလို ကြိုတင်လျှောက်ထားရသည်။ ပွဲစားလဲမရှိပါ။ ပွဲစားနှင့်လျှောက်ပါကလည်း အမြန်မရပါ။ ပွဲစားက သေသေချာချာ စစ်ဆေးပေးသည့် အလုပ်ပဲလုပ်ပေးပါသည်။ မြန်မာသံရုံးတွင် ပတ်စပို့လျှောက်ပါက ၂ရက်နှင့်ရခြင်းဆိုသည်မှာ ထပ်မံပြောရလျှင့် လာဘ်စားမှုမရှိ Role Model မြန်မာ့ဝန်ဆောင်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာလာဘ်စာမှု အနည်းဆုံး စင်ကာပူနိုင်ငံမှ မြန်မာသံရုံးဝန်ထမ်းများ မြန်မာပြည်ဝန်ထမ်းများအတွက် စံနမူနာဖြစ်နေသည်မှာ ဝမ်းမြောက်၊ ဂုဏ်ယူဖွယ်ဖြစ်ပေသည်။
နောက်ဥပမာ.. ကျွန်ုပ် ပိုက်ဆံအ်ိတ် Wallet ပျောက်သွာသောကြောင့် မှတ်ပုံတင် (သို့မဟုတ်) ကားမောင်းလိုင်စင် အသစ်ပြန်လုပ်ရမည်။ မြန်မာပြည်တွင်း လုပ်ငန်းလုပ်ရင်း အမြဲခရီးသွားနေရသောကြောင့် မုံရွာမြို့မှတ်ပုံတင်ဌာန နှင့် မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်ဌာန တို့တွင် ကျွန်ုပ်ဘယ်လိုဘယ်ပုံ အသစ်လုပ်မည်ဟု စာဖတ်သူများ ထင်ပါသနည်း။ ကျွန်ုပ်သည် လာဘ်ငွေ (လက်ဆောင်ငွေကြေး) ပေးမည်မှာ သေချာပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ရမည် မသေချာ၊ စောင့်ဆိုင်းနေရပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်အတွက် ငွေ ၅သောင်း ကုန်ကျချင်ကုန်ကျပါစေ၊ ပေးမည်၊ မြန်မြန်ရလျှင် ကျေးဇူးပင်တင်မည်…။ ထိုဥပမာအရ မှတ်ပုံတင်နှင့်မော်တော်ယဉ်လိုင်စင် ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ အထူးသဖြင့်မြို့နယ်ဦးစီမှုးအတွက် ပွပေါက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အစိုးရဌာနများဖြစ်သော ဝန်ကြီးဌာန ၃၆ခုနှင့် ကော်ပိုရေးရှင်း၊ ဦးစီးဌာနပေါင်းမျာစွာမှ ညွန်ချုပ်၊ ညွန်မှုး၊ ပြည်နယ်တိုင်း၊ မြိုနယ်မှုးများ၊ ပညာရေးမှုး၊ တရားရေးဝန်ကြီးနှင့် နောက်ဆုံး စာပို့သမားအဆုံး လစာငွေနှင့်မလောက်သူက လောက်အောင် ရှာဖွေတောင်းရမ်းသည်။ လောက်ငှနေသူလည်း ချမ်းသာအောင်လာဘ်ယူသည်။ ချမ်းသာနေပြီးသူကလည်း ပိုပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝအောင် လုပ်သည်။
အစိုးရဝန်ထမ်းများကို ငွေပေးမှလုပ်ပေးခြင်းကို Corruption ဟု ကျွန်ုပ် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လိုပါသည်။
စီးပွားရေးသမားများ လာဘ်ပေး၊ လာဘ်ယူ လုပ်ခြင်း
ငွေရအောင်၊ အမြတ်ရအောင် လုပ်ခြင်းကို စီးပွားရေးလုပ်သည်ဟု ခေါ်သည်။ စီးပွားတက်ရန်အတွက် သမာသမတ်လမ်း ဟူသည်မရှိပါ။ စားသုံးသူများ ကြိုက်လာအောင် လုပ်ပြီး အမြတ်ရအောင် ရောင်းရသည်။ ဝယ်သူများ ကျေနပ်အောင်လုပ်ခြင်းဖြင့် အမြတ်ရအောင်လုပ်မည်။ အီကိုနိုမစ်စနစ်များဖြင့် စီးပွားရေးကောင်းအောင် လုပ်နိုင်သော နိုင်ငံများ ကြွယ်ဝချမ်းသာလာသော ၂၁ ရာစုဖြစ်ပေသည်။
လာဘ်စားမှုမကောင်းကြောင်း အကြောင်းရေးသူ၊ ပြောသူများသည် စီးပွားရေးအဆင်မပြေသူဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ စီးပွားရေးအဆင်ပြေသူများမှာ လက်ဆောင်ပေးကမ်း၊ ကျွေးမွေးနိုင်သောကြောင့် တနည်းဆိုလျှင် လာဘ်ပေးနိုင်သူများဟု ဆိုရပေမည်။ စီးပွာရေးလောကမှ လူများသည် အစိုးရဝန်ထမ်းများကို လာဘ်ပေးပြီး သူတို့လိုချင်သည်များ၊ မြန်မြန်ရအောင် လုပ်မည်ဖြစ်သည်။
ဘယ်နိုင်ငံ၊ ဘယ်နေရာမဆို လာဘ်ပေးမှုမှာ အနည်းအများရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် Top Level Corruption ဆိုသည်မှာ ရှောင်မရပါ။ လာဘ်စားမှုအနည်းဆုံး စင်ကာပူ၊ နော်ဝေး၊ ဒိန်းမတ် စသည့်နိုင်ငံများတွင်လည်း လာဘ်ပေးမှုများ ရှိနေပါသည်။ အောက်ပါ Eleven Media သတင်းတစ်ခုကို မူရင်းအတိုင်း တင်ပြလိုက်ပါသည်။
တရုတ်ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမတ် ၅၀ ကျော် ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခံရ
ဘေဂျင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၈
ရွေးကောက်ပွဲ မသမာမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟူနန်ပြည်နယ် လွှတ်တော်အမတ် ၅၀ ကျော်ကို ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်း CNA သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၇၆၃ ဦးရှိသည့် ဟူနန်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကွန်ဂရက်မှ ကိုယ်စားလှယ် ၅၆ ဦးကို လာဘ်ငွေပေးပြီး ရာထူးရယူမှုဖြင့် ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခဲ့ကြောင်း CCTV သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် ဟူနန်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကွန်ဂရက် ကိုယ်စားလှယ် ၅၆ ဦးထံမှ လာဘ်ငွေများ လက်ခံ ရယူထားကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိ ခဲ့ခြင်းကြောင့် မြူနီစီပယ် အရာရှိ ၅၁၂ ဦးကိုလည်း ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခဲ့ကြောင်း တရုတ်အစိုးရပိုင် Xinhua သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
တရုတ် မြူနီစီပယ် အရာရှိများမှာ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကို ခန့်အပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာရှိကြောင်း CNA သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြူနီစီပယ် အရာရှိများ ပါဝင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲ လာဘ်စားမှု ဖြစ်စဉ်တွင် လာဘ်ငွေပေးမှု ဒေါ်လာ ၁၈ သန်း တန်ဖိုးခန့်ထိ ရှိကြောင်း အစောပိုင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းကဲ့သို့သော လွှတ်တော်အမတ်များ ပါဝင်နေသည့် လာဘ်စားမှု ဖြစ်စဉ်များမှာ တရုတ် ပြည်သူ့ကွန်ဂရက်စနစ်၊ ဆိုရှယ်လစ် ဒီမိုကရေစီ၊ ဥပဒေနှင့် ပါတီစည်းကမ်းတို့အပေါ် ကြီးစွာ ခြိမ်းခြောက်နေကြောင်း Xinhua သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဟူနန်ပြည်နယ် ဟန်ရန်ပါတီ အကြီးအကဲဟောင်း တုန်မင်ချင်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ မသမာမှုတွင် တိုက်ရိုက် တာဝန်ရှိကြောင်း တရုတ်အစိုးရပိုင် မီဒီယာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အကျင့်ပျက် လာဘ်စားမှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး တရုတ်ပြည်သူများကြား စိတ်ဆိုး ဒေါသထွက်မှုများ ကြီးမားလာပြီး အကျင့်ပျက်သည့် အရာရှိကြီးများကို သာမက အောက်ခြေ အရာရှိ များကိုလည်း စစ်ဆေး အရေးယူသွားမည်ဟု တရုတ်သမ္မတသစ် ရှီကျင့်ဖျင်က အာဏာ စတင်ရယူခဲ့သည့် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်မှ စတင်ပြီး သတိပေး ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းကဲ့သို့ ပြောကြားပြီးနောက် အကျင့်ပျက် လာဘ်စားမှုများကို ဆက်တိုက် အရေးယူလျက်ရှိပြီး ဟူနန်ပြည်နယ် အမတ်များ ထုတ်ပယ်ခံရသည့် သတင်းသည် နောက်ဆုံး ထွက်ပေါ်လာသည့် သတင်း ဖြစ်သည်။
ဟူနန်ပြည်နယ်သည် လူဦးရေသန်း၆၀ကျော်ရှိပြီး၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်ဖြစ်သောကြောင့် Role Model စံနမူနာတစ်ခု လုပ်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ တရုပ်ပြည်ကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွင် တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုး တကယ်တိုးတက်လိုပါက လာဘ်စားသူ အစိုးရဝန်ထမ်းများအား အရေးယူ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုသိမ်းဆည်းသော နည်းလမ်းမှတပါး အခြားရှိဟန်မတူပါ။ အမေရိကန်ကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွင် ကွဲပြားစွာ ဥပဒေစိုးမိုးမှု နည်းလမ်းတမျိုးကျင့်သုံးရပါသည်။ ဆင်းရဲသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဝန်ထမ်းတိုင်း မလုံလောက်၊ အောက်ဆိုက်ဝင်ငွေ ရှာနေရချိန်တွင် ကြီးမားလှသော နိုင်ငံဘဏ္ဍာများကို ကာကွယ်ဖို့ အလွန်ခက်ခဲလှပါသည်။ အစိုးရဝန်ထမ်းများ လစာနှင့် စားဝတ်နေရေး မလေုာက်မငှဖြစ်ပါက ဝန်ထမ်းငယ်များ လာဘ်စားတော့မည်။ ထိုအခါ ဝန်ထမ်းကြီးများမှာ လက်ခုပ်တီးကာ လာဘ်ပိုစားကြတော့မည်ဖြစ်သည်။ အဓိကအချက်မှာ နိုင်ငံအုပ်ချုပ်သူများ စိတ်ဓါတ်မြင့်မြတ်ပြီး ချိုးခြံရောင့်ရဲ့သူများစွာ ရှိနေရန် အရေးကြီးပါသည်။ ထို့နောက် အစိုးရဝန်ထမ်းများ လစာနှင့်လောက်ငှစွာ နေထိုင်နိုင်ဖို့ လုပ်ပေးရပါမည်။
ပါလီမာန်ဒီမိုကရေစီခေတ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအစိုးရအဖွဲ့က ဗိုလ်ချုပ်အစ်ကို ဦးဘဝင်းကို ကျောင်းအုပ်ရာထူးမှ ထွက်စေပြီး ဝန်ကြီးလာလုပ်ခိုင်းရာတွင်၊ လာဘ်ပေးမရသော ဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ စီးပွားရေးသမားများက ဦးဘဝင်းကို လာဘ်ပေး၍ မရသောအခါ ဦးဘဝင်း၏ လက်စွဲတော် ကုလားလေးကို လာဘ်ပေးပြီး၊ ဦးဘဝင်း လက်မှတ်ရအောင် လုပ်လာခဲ့သည်။ ထိုအခါ ဦးဘဝင်း သိသွားပြီး လက်မှတ်ထိုးမပေးပဲ ထိုကုလားလေးကို အလုပ်မှထုတ်ပစ်လိုက်လေတော့သည်။ တစ်ခါက ဖြစ်ပါသည်။ ယခုလည်း ဖြစ်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
မြန်မာပြည်တွင် ဝန်ကြီး ၃၆ဦးနှင့် အကြီးတန်း အစိုးရအရာရှိကြီးများ လာဘ်စားရန် ခက်ခဲသွားမည့်အခြေအနေတစ်ခုကိ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရက လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု ကြားသိရသည်။ အရာရှိကြီးများ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ကြေညာခြင်းလောက်နှင့် မဟုတ်ပါ။ သူတို့ မိန်းမ၊ သားသမီးများ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများက အဓိကကျပါသည်။ ငွေချမ်းသာကြွယ်ဝသူက ပိုပြီး လဘ်ပေး၊ လာဘ်ယူလုပ်ကာ အကြီးအကျယ် ချမ်းသာချင်သည်မှာ လူသဘာဝဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်သူများသည် ချမ်းသာလိုစိတ် နည်းပါးသူများဖြစ်မှ တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုး တိုးတက်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် စိတ်ဓါတ်မြင့်မြတ်သူများ အုပ်ချုပ်မှ တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးတိုးတက်ပါသည်။ တော်ရုံစိတ်ဓါတ်ရှိသူများ အစိုးရအရာရှိဖြစ်လာလျှင် ပံ့ပိုးပေးသူများဖြင့် Corruption ဖြစ်လာပြီး၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝလာလေ့ရှိသည်။ ငွေချမ်းသားသူများ ..သူတို့ကို အခွန်ဘယ်လိုကောက်မည်နည်း။ သူတို့ကို အစိုးရအဖွဲ့မှ ဘယ်တော့ အနားယူ၊ ချန်ထားမည် ဆိုသည်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက် Political Rivals များကို နှိပ်ကွပ်အနိုင်ယူခြင်းတွင် Corruption နည်းကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ နိုင်ငံရေးသမားတိုင်း Corrupted People များနှင့်မကင်းနိုင်ပါ။
One Response to Corruption ဆိုသောစာလုံးကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လိုပါသည်
Thi Han on January 7, 2014 at 9:22 pm
Don’t so praise about Myanmar Embassy’s dealing! There are hidden secrets behind their faces.
No receipts for froms,photo,express money and Passport renewal fees [Total S$210 where gone?]